Home » My Dear Diary » . မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၂၉-၀၇-၂၀၁၅
စိမ်းရောင်ခြယ် သကွယ်။ :-)))
ဟီလာရီ.. သမ္မတကျမ်းကျိန်(ဖြစ်)ရင်.. ၂၀၁၇..
အဆင့်ရှိ တဲ့ သတင်းဌာန ကတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
သူ့ ဘုန်းး သူ့ ကံ ကို က …..
အဘ တို့ နောင်တ မရ ကြနဲ့ သလားးး….
ဒင်းးတို့ စိတ်ရော ရုပ်ရော ကျက်သရေ က ….
သွေးသောက်ညီမကို အားဖြည့်သွားတယ်။ :))
ဒေါ်ါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အင်အားအရှိဆုံးနဲ့ အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးကတော့
ဂေါတမဗုဒ္ဓကတော့ ရှင်းတယ်… သူ့ရုပ်ရည် အသရေတော်ကို လာကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီး ကို ကောလွှတ်လိုက်တယ်ဖတ်ဖူးငဲ့..
ဒကာမဂျီး က … ရူပ ထက် ဉာဏ်ပေါ် ကို ပိုကြိုက်ပါတယ် ကိုယ်တော်လေးဂီ ဖျာ့။
သမီးလည်း အရမ်းချစ်တာ.. တစ်ခါလောက် ဖက်ထားချင်တယ်..
ဒီလောက် ကျက်သရေ ရှိတဲ့ ပုံ ပါတဲ့ ပို့စ် ကို နီပေးနေတာ
ဟုတ်လား။ မိုက် အပြင်မှာ မြင်ဖူးတယ်လား။
ဝင်ရောက်အားပေးသူများ ကျေးဇူးပါ။ :-)))
ဒါက ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ကုသိုလ် ကံနဲ့လည်းဆိုင်တယ်။